Lahatsoratra nosoratan'i Chris Benham
Fantatr'i Chris fa ny fivarotana lehibe dia noforonina amin'ny fihainoana ny mpanjifanao - tsy miresaka amin'izy ireo. Nampihariny io eritreritra io mba hanampy amin'ny fanandratana orinasa maromaro ho amin'ny toeran'ny mpitarika tsena. Mandeha marketing ho an'ny Alchemer dia manome an'i Chris fahafahana tsy manam-paharoa hamorona marketing mifandraika amin'ny mpanjifa mifototra amin'ny tamberin'izy ireo. Chris dia nanatevin-daharana ny Alchemer taorian'ny nitazonana ny andraikitry ny marketing mpanatanteraka tao amin'ny Symantec, Avast, Webroot, ary Yellowfin BI. Izy dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Kansas.
Lesona 3 avy amin'ny orinasa Centric-Centric
Talata, Aogositra 10, 2021 Zoma, Febroary 11, 2022 Chris Benham
Ny fanangonana ny valin'ny hevitry ny mpanjifa no dingana voalohany miharihary amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsara indrindra. Fa ny dingana voalohany ihany. Tsy misy zava-bita raha tsy hoe mampihetsika karazana hetsika ny fanehoan-kevitra. Matetika loatra ny fanamarihana dia angonina, atambatra ho tahiry valin-kafatra, voadinika rehefa mandeha ny fotoana, misy ny tatitra, ary nony farany dia nisy fampisehoana nanoroana fanovana. Hatramin'izay dia nanapa-kevitra ireo mpanjifa izay nanome ny heviny fa tsy misy na inona na inona vita amin'ny fampidirany ary efa nanao izany izy ireo